Moto 360, anyị na-anwale ya maka gị | Gam akporosis
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | IFA, Lenovo, Nyocha, smartwatch
Ọ bụ ihe nzuzo na-emeghe na Lenovo ga-ewebata ụdị ọhụrụ nke otuto Moto 360. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ bụ ngwaọrụ a tụrụ anya ya, nke ahụ apụtaghị na ọ dọtaghị ọha mmadụ. Ma ọ ga-ghọtara na emeputa O jisiri ike iju anyị anya na Moto 360 ọhụrụ ya.
Iji malite, Moto 360 ọhụrụ nwere atụmatụ mara mma karị, na mgbakwunye na nhazi anọ dị iche iche dabere na profaịlụ dị iche. Anyị nyochaa ihe nlereanya na 46 mm okirikiri na ihe ndị a bụ ihe ngosi vidio anyị.
1 Ihe a haziri bụ ebe siri ike nke Moto 360
2 Nka na ụzụ e ji mara nke Moto 360
Ihe a haziri bụ ebe siri ike nke Moto 360
Ọ bụrụ na ihe mere nke ọma Lenovo kemgbe megharia atụmatụ nke Moto 360. Onye nrụpụta Asia jisiri ike iju anyị anya ọzọ site na ịmebata usoro mgbanwe dị egwu.
Iji malite, anyị ga-enwe ohere nke hazie elekere na-amasị gị ekele maka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke eriri dị. N'akụkụ a, MotoMaker ga-enwe obi ụtọ onye ọrụ, mana dozie obere akpa ebe ọ dabere na otu ị si ahazi Moto 360 gị, ọ nwere ike ịpụta maka ezigbo elu.
Nkọwa ọzọ na-abịa na nhazi nke ihu nche. Ma ọ bụ na Moto 360 ọhụrụ ahụ nwere bọtịnụ anụ ahụ n'akụkụ aka nri, dị ka ihe atụ gara aga, mana na nke a, ha welitere ya ntakịrị iji mee ka ọ nwekwuo ntụsara ahụ ma nye ya lee ezigbo anya na smartwatch Lenovo.
Nka na ụzụ e ji mara nke Moto 360
Agwala m gị na enwere ọtụtụ nhazi, ọ bụ ezie na ọ bụ na ha dị iche na teknụzụ, ha anaghị adị obere: ọsịsọ nha na eziokwu ahụ bụ na ụdị egwuregwu jikọtara sistemu GPS. Maka ndị ọzọ anyị hụrụ a Dikpọ oku 46 ma ọ bụ 42 mm Ọ na-enweta mkpebi nke 360 ​​x 330 maka ụdị 46 mm na 360 x 325 maka ụdị nke nwere obere akụkụ.
Moto 360 ọhụrụ ahụ na - etinye ihe nhazi Qualcomm Snapdragon 400 yana 512 MB RAM na 4 GB nke nchekwa dị n'ime. Anyị nwere ekele na ha jiri SoC dịtụ ọhụrụ ma ọ na-egosi na arụmọrụ ahụ.
Ọ dị njọ na ha laghachiri jiri ihe mmetụta ọkụ. Ọ bụghị echiche dị njọ ebe ọ bụ na ọ na-eme ka ohere nke elekere ahụ ka mma, mana na ha etinyela ya n'otu ebe, na-agbaji usoro ịpị ahụ, enweghị mgbaghara.
Enwere obere ihe gbasara Android Wear nke ịmaghị: usoro dị mma na nke nwere njikwa nke na-emezughị ozi ya. N'ime ya Moto 360 na-agba ọsọ nke ọma na ngwa ngwa na-eme ka ahụmịhe ahụ dị ụtọ karịa ụdị ndị ọzọ.
Nkwubi okwu m di nfe: Motorola emeela nnukwu ọrụ na nhaziỌ dị oke njọ gbasara ihe mmetụta ọkụ, ọ dịkwa mma karịa karịa onye bu ya ụzọ.
Ugbu a, anyị ga-echere ịrụ otu nyocha zuru oke ebe anyị nwere ike ịhụ ka batrị gị si eme, ihe kachasị mkpa na elekere nke ụdị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Lenovo » Moto 360, ndị a bụ echiche anyị mgbe anyị lechara ya na IFA 2015
Budata Ime Anwansi ugbu a, ọhụụ ọhụụ GPS GPS nke ị ga-esi pụta